Iindaba-Abalandeli beBTS baseIndiya banyusa imali ngokukhawuleza ukulwa nokukhula kwelizwe
Abalandeli beBTS baseIndiya banyusa imali ngokukhawuleza ukulwa nokukhula kwelizwe
ixesha lobunzima lentsholongwane ye-corona
Ngelixa lokukhula kwengxaki ye-coronavirus yaseIndiya, abalandeli be-BTS bathathe inyathelo lokunyusa imali yokunceda abo banesidingo.
Kwiveki ephelileyo, iinzame zoncedo ze-Covid-19 eziququzelelwe liqela leqela labalandeli be-BTS elaziwa ngokuba nguMkhosi, linyuse ngaphezulu kwezigidi ezibini zeerandi (iidola ezingama-29,000 zeedola).
Ilungelelaniswe kwindawo yokufumana inkxaso-mali yaseIndiya iMilaap, iakhawunti yemidiya yoluntu eyaziwa ngokuba yi "Covid Relief India nguMkhosi we-BTS" inyuse ngaphezulu kwezigidi ezibini zeerupees kwiiyure ezingama-24, kunye nabaxhasi abangama-2,465 abanikelayo.
Ngaba unemibuzo malunga nezihloko ezinkulu kunye neendlela ezivela kwihlabathi liphela?Fumana iimpendulo ngoLwazi lweSCMP, iqonga lethu elitsha lomxholo ogcinwe ngabachazi, ii-FAQs, uhlahlelo kunye ne-infographics eziswe kuwe liqela lethu eliphumelele amabhaso.
Umqokeleli-mali weza ngexesha lobhubhani wesibini welizwe we-coronavirus, kunye neemeko ezingazange zibonwe ngaphambili kunye nokufa njengoko iIndiya ijongene nengxaki yezempilo ebangelwa kukungabikho kwezixhobo zonyango-kubandakanya ukunqongophala kweoksijini- kunye nolunye uhlobo olutsha lwentsholongwane.
Iinzame zesisa zomkhosi zigxile ikakhulu ekuboneleleni ngeoksijini kunye nezinye izinto zonyango, kunye nokutya kwabo basweleyo.Eli phulo labeka phambili iMaharashtra kunye neDelhi, apho imeko malunga nobhubhane iyingozi.
Ngokomkhondo we-Covid-19 ovela kwiYunivesithi yaseJohns Hopkins, ukusukela ngoMvulo kusasa, i-Indiya inenani elipheleleyo lamatyala aphantse abe zizigidi ezili-17, kubhubhe ngaphezulu kwe-192,000.Kwiveki ephelileyo, i-Indiya inike ingxelo yovavanyo olungaphezulu kwama-300,000 ngosuku;zininzi iinkxalabo zokuba usulelo luxelwa ngaphantsi.
Izigulana ze-coronavirus zaseIndiya zifuthaniseleka phakathi kokunqongophala kweoksijiniAmazwe amaninzi abhengeze ukuba azakubonelela ngoncedo, kodwa amalungelo awodwa omenzi wechiza agcina i-Indiya kunye namanye amazwe ekuveliseni isitofu esaneleyo sokunyanga abemi bayo.
Amanqaku angakumbi avela kwi-SCMP
Utshintsho kwinkqubo yonyulo yaseHong Kong ihlala ithengiswa nzimaEKhambodiya, ukuvalwa okwandisiweyo kwePhnom Penh coronavirus kushiya abasebenzi bempahla, abathengisi bentengiso belambileIinkwenkwezi ezisi-8 zaseKorea 'zirhoxisiwe' emva kwamahlazo: uSeo Ye-ji wakhutshwa kwiSiqithi se-K-drama, ngelixa uJi Soo ewushiyile uMlambo Xa iNyanga iphuma - kwaye unokumangalelwa nge-US $ 2.7 yezigidiIngxabano yomda waseTshayina-Indiya: ngaba ukutsalwa kweNew Delhi kwichibi lasePangong Tso kwakuyimpazamo?
Phakathi kweengxwabangxwaba zase-US-China, iAsia kufuneka idibane ukuze ibuyise ikamva layo
Eli nqaku lavela okokuqala kwi-South China Morning Post (www.scmp.com), amajelo eendaba aphambili anika ingxelo nge-China ne-Asiya.
Ixesha lokuposa: Apr-27-2021
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile Pharmacy Surgical Mask, Imaski yaseTshayina, Imaski ekhuselayo yaseTshayina, FFP2 Isiphefumlo, Imaski yobuso, Imaski yePPE,